Apple Music na - arụ ọrụ “mix chill out” maka ụfọdụ ndị ọrụ | Esi m mac
Apple Music na - eme ka “Mix chill pụọ” maka ụfọdụ ndị ọrụ
Ndị ọrụ Apple Music niile anabatabeghị ya, mana Apple na-ezube ịtọhapụ atụmatụ ọhụrụ akpọrọ akpọrọ nke ukwuu maka ndị ọrụ na-ege egwu iji zuru ike. A ga-akpọ aha ọhụrụ ahụ "My Chill Out Mix" ma gosipụta egwu sitere na ndị ọkacha mmasị kachasị amasị gị na ụdịrị egosi., ebe enwere ike ịmepụta ndepụta nke kacha dịrị anyị mma. Usersfọdụ ọrụ achọpụtawo ya taa. Enwere ike ịchọta ihe ngosi ọhụrụ na ngalaba "maka gị" yana akara obi.
Dị ka ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, Apple na-emejuputa ọrụ a naanị na akụkụ nke ndị ọrụ. Ya mere, ọ bụrụ na ibanye na ọ dịghị, ị ga-echere ụbọchị ole na ole mgbe Apple na-achọpụta na ihe niile na-arụ ọrụ dị ka atụ anya na ihe nlele mbụ nke ndị ọrụ. Enweghị usoro nhazi oge, mana omume ndị a anaghị ewekarị otu ọnwa. Ya mere, obere ndidi.
Ndepụta atọrọ ọhụrụ a jikọtara ndị Apple mepụtara n'afọ gara aga na aha "Ọkacha mmasị m" ma ọ bụ "Ngwakọta egwu ọhụrụ m." Usoro nhọrọ egwu maka egwu egwu kere dị ka nke ndepụta ndị ọzọ Apple Music: algọridim na-amụ egwu nke onye ọrụ na-ege ntị, ndị akara dị ka ọkacha mmasị na egwu ndị ọ na-egosi dị ka «masịrị m«. N'ime nhọrọ a, mepụta ndepụta ahụ na abụ ndị dị jụụ ma dị jụụ maka mgbe arụchara ọrụ, mgbatị ahụ ma ọ bụ oge dị jụụ n'ụbọchị.
Ọ bụrụ na anaghị m ege ntị n'ụdị egwu a mana enwere m mmasị n'ụdị a oge ụfọdụ? Ọ bụrụ na anyị ege ntị na Rock, Dị arọ, dịka ọmụmaatụ, a ga-emepụta ndepụta ahụ site na egwu dị jụụ nke sitere na ụdị ndị a.
O doro anya ugboro ole Chill Out ndepụta ga-enweta ume, mana ihe niile dị ka ọ na-egosi na ọnụọgụ ga-adị ka nke ndepụta Apple Music ndị ọzọ. Na ihe niile a, ị gaghị ahụ onwe gị gwụ site na ịmeghachi otu egwu ahụ na ndepụta Apple Music.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple Music na - eme ka “Mix chill pụọ” maka ụfọdụ ndị ọrụ
Lelee ụdị akwụkwọ niile na Akwụkwọ Akwụkwọ, ugbu a na-ere ya
Gbanwee foto gị na Poly Art na Trimaginator